အကြွေးတွေ ပတ်လည်ဝိုင်းနေတဲ့ သင်းသင်းကို ပြန်မကြိုက်မိလို့ တော်သေးတယ်လို့ ဟန်ငြိမ်းဦးပြောပြီ – Zartiman
သူ့တယောက်ထဲ ချေးတာလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးသူနဲ့သိတဲ့ မီဒီယာတခုက သတင်းထောက် ကိုပါသူက အာမခံပီး ချေးပေးသေး တာ အကြွေးတွေသာ ဝိုင်းနေတာနော်။ကားစင်းလုံးပြတ်ငှားပီးနယ်ကိုပြန်နိုင်တယ် ပုဂံဘုရားဖူးထွက် နိုင် တယ်။ မိသားစုလိုက် ချောင်း သာမှာပျော်ပွဲစားထွက်နိုင်တယ်။မွေးနေ့ပွဲကိုခန်းမတခုလုံး ငှားပြီးလုပ္နိုင္တယ် ….တော်သေးတယ် ။သူ့ကို ပြန်မ ကြိုက်မိလို့မဟုတ်ရင် အ ကြွေးတွေပါ လိုက်ဆပ်ပေးရမယ့်ကိန်း။
တဆယ်တိုးနဲ့ ငွေတွေပတ်ချေးပြီး အတိုးရောအရင်းရော ပြန်မဆပ်နိုင် လို့တိုင်ပတ်နေတဲ့ မတ်မတ်သင်း တခြားသူဆီချေးတာတော့ မ ဟုတ်ဘူးရုံးချိန်းတွေမှာ သူ့နောက်ကအမွဲပါပါ နေတဲ့မိတ်ကပ်ဆရာဆီက ချေးတာ သူ့တယောက်ထဲ ချေးတာလားဆိုတော့လည်း မဟုတ် ပြန်ဘူးသူနဲ့သိတဲ့ မီဒီယာတခုက သတင်းထောက် ကိုပါသူကအာမခံပီး ချေးပေးသေးတာ အကြွေးတွေသာ ဝိုင်းနေတာ။
ာနော်ကားစင်းလုံးပြတ်ငှား ပီးနယ်ကိုပြန်နိုင်တယ်ပုဂံ ဘုရားဖူးထွက်နိုင်တယ် မိသားစုလိုက် ချောင်းသာမှာပျော်ပွဲစားထွက်နိုင်တယ် ။မွေး နေ့ပွဲကိုခန်းမ တခုလုံးငှားပြီး လုပ်နိုင်တယ်…. တော်သေးတယ် ။သူ့ကိုပြန်မကြိုက်မိလို့ မဟုတ်ရင်အကြွေးတွေပါ လိုက်ဆပ်ပေးရ မယ့်ကိန်း😂တဆယ်တိုး နဲ့ ငွေတွေ ပတ်ချေးပြီး အတိုးရောအရင်းရော ပြန်မဆပ်နိုင်လို့ တိုင်ပတ်နေတဲ့ မတ်မတ်သင်းတျခား သူဆီက ချေးတာတော့မဟုတ်ဘူးရုံးချိန်းတွေမှာ သူ့နောက်ကအမြဲပါပါ နေတဲ့မိတ်ကပ်ဆရာဆီက ချေးတာ။
သူ့တယောကျထဲ ခြေးတာလားဆိုတော့လညျးမဟုတျပွနျဘူးသူနဲ့သိတဲ့ မီဒီယာတခုက သတငျးထောကျ ကိုပါသူက အာမခံပီး ခြေးပေးသေး တာ အကွှေးတှသော ဝိုငျးနတောနျော။ကားစငျးလုံးပွတျငှားပီးနယျကိုပွနျနိုငျတယျ ပုဂံဘုရားဖူးထှကျ နိုငျ တယျ။ မိသားစုလိုကျ ခြောငျး သာမှာပြျောပှဲစားထှကျနိုငျတယျ။မှေးနပှေဲ့ကိုခနျးမတခုလုံး ငှားပွီးလုပ်နိုင်တယျ ….တျောသေးတယျ ။သူ့ကို ပွနျမ ကွိုကျမိလို့မဟုတျရငျ အ ကွှေးတှပေါ လိုကျဆပျပေးရမယျ့ကိနျး။
တဆယျတိုးနဲ့ ငှတှေပေတျခြေးပွီး အတိုးရောအရငျးရော ပွနျမဆပျနိုငျ လို့တိုငျပတျနတေဲ့ မတျမတျသငျး တခွားသူဆီခြေးတာတော့ မ ဟုတျဘူးရုံးခြိနျးတှမှော သူ့နောကျကအမှဲပါပါ နတေဲ့မိတျကပျဆရာဆီက ခြေးတာ သူ့တယောကျထဲ ခြေးတာလားဆိုတော့လညျး မဟုတျ ပွနျဘူးသူနဲ့သိတဲ့ မီဒီယာတခုက သတငျးထောကျ ကိုပါသူကအာမခံပီး ခြေးပေးသေးတာ အကွှေးတှသော ဝိုငျးနတော။
ာနျောကားစငျးလုံးပွတျငှား ပီးနယျကိုပွနျနိုငျတယျပုဂံ ဘုရားဖူးထှကျနိုငျတယျ မိသားစုလိုကျ ခြောငျးသာမှာပြျောပှဲစားထှကျနိုငျတယျ ။မှေး နပှေဲ့ကိုခနျးမ တခုလုံးငှားပွီး လုပျနိုငျတယျ…. တျောသေးတယျ ။သူ့ကိုပွနျမကွိုကျမိလို့ မဟုတျရငျအကွှေးတှပေါ လိုကျဆပျပေးရ မယျ့ကိနျး😂တဆယျတိုး နဲ့ ငှတှေေ ပတျခြေးပွီး အတိုးရောအရငျးရော ပွနျမဆပျနိုငျလို့ တိုငျပတျနတေဲ့ မတျမတျသငျးတခြား သူဆီက ခြေးတာတော့မဟုတျဘူးရုံးခြိနျးတှမှော သူ့နောကျကအမွဲပါပါ နတေဲ့မိတျကပျဆရာဆီက ခြေးတာ။
အသက်ရှုမှား လောက်စေတဲ့ အမိုက်စာဒကကွက်တွေနဲ့ အပီအပြင်ကြဲပြနေတဲ့ သန္တာဗိုလ်(ဗီဒီယို)
အသည်းယားစရာ ကောင်းနေတဲ့ ပိုပိုရဲ့ အမိုက်စားဗီဒီယို
ဆက်ဆီကျကျ အတွင်းသားများ ကို ပုရိသကြီးအား အသဲယားဖွယ် ပြသ လိုက်တဲ့ သဇင်ဦး ရဲ့ အမိုက်စားဗီဒီယို